Banaanbaxyo ayaa ka socda Minneapolis oo looga soo horjeedo dil arxan daro ahaa oo booliska… – Hagaag.com
Banaanbaxyo ayaa ka socda Minneapolis oo looga soo horjeedo dil arxan daro ahaa oo booliska…
Posted on 28 Maajo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa ka socda banaan baxyo xoogan oo looga soo horjeedo dil araxn dara ahaa oo booliiska magaaladaasi u geesteen nin Madow ah oo lagu magacaabo George Floyd.
Dilka ninkan madowga ah u geesteen booliiska Cadaanka ah ayaa caro badan ka abuuray dalka Mareykanka, waxaana magaalada Minneaplolis ka socda dibad baxyo lagu cambaareynayo falkaasi dilka ah.
Ciidamada booliiska ayaana dadka dibad baxayaasha ah si ay u kala eryaan u adeegsaday sunta dadka ilmada ka keenta iyo sidoo kale rasaasta cinjirka ah,waxaana arintaasi ka carooday siyaasiyiin iyo dad kale.
Xildhibaan Ilhan Cumar oo laga soo doortay magaalada Minneapolis ayaa si kulul u cambaareysay dilka loo geestay George Floyd, waxa ay sidoo kale cambaareysay sida booliiska ula dhaqmayaan dadka banaan baxa dhigaya.
Ilhan ayaana ceeb ku tilmaantay waxa ka dhacaya magaalada Minneapolis, waxa ayna ugu baaqday ciidamada booliiska in ay u turaan dadka u banaan baxaya sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda.
“U adeegsashada rasaasta caagga ah iyo sunta ka ilmeysiisa dibadbaxayaal aan hubeysnayn oo ay ku jiraan caruur, marka sidaa darteed marnaba looma dul-qaadan karo, waxa maanta ka dhacaya magaaladeena waa arrin ceeb ah, boolisku waa iney is xadidaan, bulshadeenuna waxay u baahantahay waqti ay ku dawoowdo.”ayey tiri Ilhan Cumar.
Dilkan ka dhacay magaalada Minneapolis ayaa noqday mid si weyn u gil gilay quluubta dad badan, waxa uuna dilkan damqiyay nabaro hore oo dadka madowga ku yaalay oo ka dhashay jinsi naceybka mar waliba lagula kaco.